Ciidamada Kenya iyo maamulka Axmed Madoobe oo Bandow dhan walb ah kusoo rogay magaalada Kismaayo.
Wednesday August 21, 2019 - 11:50:12 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xaalad bandow ah ayay xalay ku waabariisatay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka jireen xiisado siyaasadeed.
Wararka ka imaanaya magaalada xeebeedka Kismaayo ayaa sheegaya in kumanaan katirsan ciidamada melleteriga Kenya iyo maleeshiyaadka maamulka Jubbaland ay bandow adag kusoo rogeen magaalada.
Waxaa albaabada loo laabay xarumaha maamulka ee magaalada sidoo kale waxaa laxiray garoonka diyaaradaha Kismaayo iyo dhammaan waddooyinka magaalada soo gala.
Tallaabadan ayaa timid saacado kadib markii guddiga amniga maamulka isku magacaabay 'Jubbaland' uu soo saaray amar ah in Bandow cirka ,badda iyo barriga ah lageliyo magaalada illaa ay ka dhacayso doorashada madaxtinimada maalinta Sabtiga ee soo socota.
Goob joogayaal ku sugan Kismaayo ayaa sheegay in tobanaan gaadiid ah oo khudaar iyo caano uqaadi jiray magaalada ay ku xiranyihiin banaanka Kismaayo, ciidamo isugu jira Kenyaan iyo Soomaali ayaa lagu arkayaa iyagoo jidgooyooyin dhigtay waddooyinka gala magaalada.
Bandowgan lagusoo rogay xarunta Jubbada Hoose ayaa looga gol leeyahay sidii uu Axmed Madoobe uga badbaadi lahaa shirqoollo siyaasadeed oo Farmaajo iyo Kheyre umaleegayaan, tallaabadaan ayaa larumeysanyahay in ay cuuryaaminayso dhaq dhaqaaqyadii ay wadeen siyaasiyiin mucaarad ah oo bilihii dambe Kismaayo ku sugnaa.